Mutinhiri rejoins Zanu PF. - Josey News
Mutinhiri rejoins Zanu PF.
Tracy Mutinhiri, former MDC Alliance top official is set for a sensational come back to Zanu PF after handing in an application letter at the Mashonaland East provincial offices in Marondera saying her intention to rejoin the ruling party.
The party’s provincial administration secretary Kudzai Majuru revealed this during a provincial co-ordinating committee (PCC) meeting which was held in Marondera on Saturday last week.
During the late Morgan Tsvangirai’s era, Mutinhiri joined the opposition party after defecting from Zanu PF, last year February she quit the MDC Alliance in citing “personal reasons” after having held influential positions for four years.
Oswell Gwanzura from Goromonzi district and Joseph Kamwendo from Murewa are the other two who have applied to be readmitted into the Zanu PF.
Gukurahundi monument desecrated and plaque stolen within…
After standing as an independent candidate durjng 2018 elections, Gwanzura was expelled as he protested against former Goromonzi South legislator Petronnela Kagonye’s alleged rigging of the party’s primaries, while Kamwendo had lost favour with the late provincial chairmanship Joel Biggie Matiza.
Majuru continued to say that Mutinhiri’s ex-husband and former minister Ambrose Mutinhiri had also applied to work with the Zanu PF provincial team.
To beef up its support base ahead of the 2023 elections, ZANU PF is luring expelled members and opposition party activists to join the party.
Top MDC officials Lillian Timveos and Blessing Chebundo also defected to Zanu PF recently.
Mauritania: Former President Mohamed Ould Aziz Charged With Corruption
Gukurahundi monument desecrated and plaque stolen within hours
“We Can Fix The Economy In Just 3 Months”: Sikhala